Akaiky ny fifidianana Vola sandoka 400 tapitrisa ariary sarona
Vola sandoka mitentina 20 tapitrisa ariary no sarona tao Vavatenina ny talata 15 oktobra 2019.
Rehefa nahazo vaovao avy tamin'olona tsara sitrapo iray ny zandarimaria tao Fenoarivo Atsinanana fa misy olona mitondra vola sandoka maro ho any Vavatenina dia natao haingana ny fijerena ifotony sy fanaovana sakana fitsirihana (barrage). Tao Vavatenina no tratra ny fiara 4x4 pickup Ford Ranger iray izay nitondra vola sandoka 20 tapitrisa Ariary sy vola tena izy 80 tapitrisa Ariary. Olona miisa dimy no efa voasambotra ary nitohy hatramin’ny omaly ny fisavana ny tranon'izy ireo ahitana ny nametrahany ny vola sandoka ambiny. Tena betsaka izany vola sandoka 400 tapitrisa izany, ary manomboka sesilany ny tranga tahaka itony amin’izao fotoana akaiky fifidianana izao.sy ity tranga tao Vavatenina ity ihany fa efa nisy ny hafa sarona. Vao tamin’ny alatsinainy teo ihany koa ohatra no niakatra fitsarana teny amin’ny PAC (Pôle Anti-Corrumption) ny raharaha vola sandoka 40 tapitrisa ariary tamin’ny volana aprily 2018, ka olona 14 no nidoboka eny Tsiafahy. Rehefa tsy fifidianana dia ny resaka fividianana lavanila no ahitana vola sandoka. Miparitaka ny vola amin’ireo fotoana ireo, indrindra fa amin’ny propagandy na amin’ny fotoam-pifidianana mihitsy hividianana ny safidim-bahoaka. Tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, dia toerana maro no nisiana fahadisoam-panantenan’ireo olona nizarana vola, toy ny tao Ambatondrazaka, Toliara,… Mety ho zavatra hafa mihitsy ihany koa anefa no kotrehina amin’ireny fa tsy resaka fividianana ara-politika ihany.